Qalabka lagu abuuro sawirro waaweyn shabakadaha bulshada | Abuurista khadka tooska ah
Qalabka si loogu abuuro sawirro wanaagsan shabakadaha bulshada
Maanta, shabakadaha bulshada ayaa ah goobo laga isticmaali karo, taas oo dadka isticmaala ay wadaagaan waxyaabo aan dhammaad lahayn oo nooc walba ah maalin kasta. Sidoo kale, dadku waxay ula macaamili karaan siyaabo kala duwan maadadan, iyo sidoo kale inay ku lug yeeshaan wada sheekaysi mid-mid-mid ah ama wada-hadal kooxeed.
Marka, warbaahinta bulshada sidoo kale noo oggolow in aan xulano isticmaaleyaasha kaas oo aan dooneyno inaan ku qabanno dhammaan isdhexgalka noocan oo kale ah oo aan wadaagno macluumaadka. Maanta, shabakadaha bulsheed waxay ku raaxaystaan ​​malaayiin isticmaale adduunka oo dhan.
1 Qalabka lagu abuuro sawirrada shabakadaha bulshada
2 Sidaa darteed, qaar ka mid ah aaladda tafatirka webka waxay noqon karaan:
2.4 Qorisyada Kootada
Qalabka lagu abuuro sawirrada shabakadaha bulshada
Isdhexgalkaan oo dhan, dadku waxay macluumaadka ka dhigaan wax wadajir ah ilbiriqsiyo gudahood, qaab lagu arki karo u baahan tahay in wax laga beddelo waxyaabaha qaarkood, si hufan nuxurka nooca sawirka ah iyo tan xitaa ka sii badan marka macluumaadka la wadaagayo uu yahay hantidooda.
Marka waxay ku saabsan tahay muhiimada ay dadka qaar ka arki karaan gudaha macluumaadka ay go aansadaan inay ku soo rogaan shabakadaha bulshada, iyo sidoo kale habka ay uga dhigayaan waxyaabahaan wax wada jira. Marka maqaalkani wuxuu daaha ka qaadi doonaa tiro ka mid ah qalab u oggolaan doona isticmaalaha inuu wax ka beddelo sawirradooda si looga dhigo kuwaan alaab muuqaal ah oo aad u wanaagsan dhammaan dadka arki kara.
Sidaa darteed, qaar ka mid ah aaladda tafatirka webka waxay noqon karaan:
Una qalab in ayaa noo oggolaan doonta inaan wax ka beddelno canaasiirta in aan ku darno shabakadaha bulshada, iyo sidoo kale qaar ka mid ah baloogyada iyo shaqooyinka dhijitaalka ah.
Muhiim maahan in la sameeyo rakibaad kasta, maadaama qalabkani uu yahay mid shabakadeed oo keliya, sababtaas awgeed, adeegsaduhu wuu heli karaa wakhti kasta, iyada oo aan xaddidnayn sida boos ku yaal disk adag ama shuruudo gaar ah. Sidoo kale, waxaa suurtagal ah in barnaamijkan laga helo taxane ah waxay bixisaa sawirro kaas oo aan ku shaqo tagno.
Qalabkan waxaa loogu talagalay wax ka beddelka iyo faahfaahinta mashaariicda fiidiyoowga ah iyo qaybta ugu wanaagsan dhammaantood waa inaadan khabiir ku ahayn cilmiga maqalka.
Sidan oo kale, Picovico noqo noqosho mid ka mid ah qalabka tafatirka fiidiyowga ee ugu yar dhammaan isticmaaleyaasha. Iyada oo casharro kala duwan, barnaamijkan wuxuu u oggolaanayaa isticmaalaha inuu Abuur taxane sawir ah kaas oo waliba la socon kara dhawaqyada qaarkood. Sidaa darteed, waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ku darto saameyno gaar ah sawirada lagu soo bandhigi doono shaashadda.
Este tifaftiraha sawirka waxay u saamaxdaa isticmaalaha inuu galo tafatirka muuqaalka xirfadeed isagoon u baahnayn.
Cusbooneysiinta barnaamijkani waa awoodda uu adeegsadaha awoodi doono inuu ku fuliyo mashaariic sawir adag iyada oo aan lahayn aqoon yar oo hore oo lagama maarmaan u ah. BeFunky wuxuu kuu ogolaanayaa inaad shaqooyin waaweyn qabato adigoon dhibaatada ugu weyn ka dhexeyn.
Este Barnaamijka wuxuu u ogolaanayaa isticmaalaha abuuraan weedho bas-gargaar oo aad u fiican, hab sidan u yidhi oraahda waxaa weheliya sooyaal aad u wanaagsan oo loogu talagalay dhadhanka isticmaalaha. Isku darka midabada uu barnaamijkani sameyn karo ayaa uga tagi doonta isticmaalaha inuu ku qanco mid kasta oo ka mid ah mashaariicdooda.
Waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad wax abuurto sawir wanaagsan qof kasta. Iyadoo in kabadan 40 loox, iyo sidoo kale in ka badan 200 khariidadood si loogu soo bandhigo macluumaadka sida ugu macquulsan uguna macquulsan, barnaamijkani waa mid ka mid ah xalalka ugu fudud ee dhammaan adeegsadayaasha u baahan inay ku soo bandhigaan macluumaadka habka ugu habboon laakiin aan miyirkoodu lumin.
Barnaamijkani waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud webka waana sababta keentay adeegsiga: fudeydkeeda.
Este Barnaamijka wuxuu u ogolaanayaa isticmaalaha dooro xarfaha qalaad qoraalkiisa, si uun inuu wax ku qori karo isha uu ku dareemi karo raaxada ugu badan iyo aqoonsiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Qalabka si loogu abuuro sawirro wanaagsan shabakadaha bulshada
Muhiimadda kala saraynta muuqaalka ee naqshadeynta
Dukumiintiyada ugu fiican ee ku saabsan naqshadeynta garaafka